Faritra Menabe: hanamboatra lalana sy hamokatra angovo i Korea Atsimo | NewsMada
Nihaona vao haingana ny lehiben’ny faritra Menabe, i Gilbert Romain, sy ny masoivohon’i Korea Atsimo eto amintsika, i Lim Sang-woo. Tetikasa niaraha-nidinika ny fanamboaran-dalana sy ny famokarana angovo.
Mbola vitsy ny orinasa manangana tetikasa any amin’ny faritra Menabe noho ny tsy fahampian’ny famatsiana angovo sy ny faharatsian-dalana. Nambaran’ny masoivohon’i Korea Atsimo fa ireo no antony lehibe misakana ny fampandrosoana, tsy ahitana fampiasam-bola any amin’iny faritra iny. Efa nasian-teny teo aloha, ny taona 2015, ny fampindramam-bola ataon’i Korea Atsimo an’i Madagasikara, 30 tapitrisa dolara. Voateny tamin’izany ny hanamboarana ny lalana RN35, manelanelana an’i Morondava sy Mahabo.
Any amin’ny faritra Menabe ihany, ry zareo Koreanina hamokatra angovo sy hanatsara ny lalana mankany amin’ny Tsingin’i Bemaraha sy Tsingin’i Bekopaka. Nambara fa hatao tsara ireo lalana ireo hisintonana mpizahatany sy ho fiarovana ny tontolo voajanahary. Ao anatin’ny fifanarahana ihany koa ny fanamboaran-dalana mampitohy an’Analamisampy sy Manja. Tsara ho fantatra fa aorian’i Japoney, ry zareo Koreanina no faharoa amin’ny fampiasam-bola any Ambatovy. Nambara tamin‘ny fihaonana ny fandrosoan’ny teknolojia koreanina, toy ny hita amin’ny Samsung sy ny Kia.
Efa tany amin’ny taona 1963 ny fifandraisana teo amin’i Madagasikara sy Korea Atsimo. Novelomina indray izany fifandraisana izany, ny taona 1993. Hatramin’izay, mahatratra 200 tapitrisa dolara izao ny varotra eo amin’ny firenena roa tonta. Tsiahivina fa anisan’ny firenena mahantra indrindra eran-tany i Korea Atsimo nandritra taona 60, afaka nihoatra izany aty aoriana rehefa notohanan’ny Fikambanana iraisam-pirenena maro, ary ankehitriny mitondra ny anjarany hanosika hampiakatra ny firenena mahantra toa an’i Madagasikara.